तीन वर्षे बालकको घाँटी निमोठेर हत्या, हत्यारा आफ्नै काकी ! | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
अपराध पूर्वाञ्चल खबर
तीन वर्षे बालकको घाँटी निमोठेर हत्या, हत्यारा आफ्नै काकी !
सप्तरी , माघ २४ गते । सप्तरीको पातो गाविसमा एक जना बालकको हत्या भएको छ । तीन वर्षीय बालकको हत्या आफ्नै काकीले गरेको खुलेको छ ।
पातो गाविस ५ गोबिन्दपुर निवासी धर्मदेव मण्डल खत्बेका ३ वर्षीय छोरा रामअवतार मण्डलको उनकै काकी उर्मिलादेवीले हत्या गरेकी हन् । बालकको घाँटी निमोठेर गत शनिबार नै उर्मिलाले हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाँटी निमोठेर हत्या गरी बोरामा हालेको अवस्थामा मृतकको घर पछाडिको बारीमै सोमबार बिहान शव फेला परेको छ ।
प्रहरीले उर्मिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बालकको शवलाई परीक्षणका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अंचल असपतालमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिवेश लोहनीले जानकारी दिए ।
उनको पत्ता कत्तै लागेन् । आमा चन्द्रिकादेवीले आफ्नो छोरो हराएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी समेत दिइन् ।
तर, प्रहरीबाट समेत बालकको खोजी हुन सकेन् । यसै क्रममा उर्मिलाका दुई सन्तान (एक छोरा र एक छोरी) ले केहि स्थानीयलाई आफूहरुलाई ५ रुपैयाँ दिए देखाइदिने भन्न थालेे । त्यसकै आधारमा बालकको शव भेटिएको छ । - एस.के. शान , ऑनलाइनखबरबाट
2/06/2017 02:23:00 PM
Labels: अपराध पूर्वाञ्चल खबर